Mg Thant: ဂူးဂဲလ်ကဖန်တီးတဲ့ နှစ်ထောင်ဆယ့်တစ်ကို နောက်ပြန်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရင်ကိုထိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု
ဘေဘီ December 18, 2011 at 5:27 AM
လူသားတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးတွေ ထုတ်ဖော်နိုင်ကြပါစေ
ကဲ မောင်သန့်လည်း ကြောက်နဲ့တော့ ၀န်ခံလိုက်တော့ :P :D စတာအတည်ပဲ
kyawzayya December 18, 2011 at 10:52 AM
mstint December 18, 2011 at 12:29 PM
တကယ်တန်းတော့ လူသားတိုင်း ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကံနဲ့ကိုယ်မို့
အထင်သေးစရာ အထင်ကြီးစရာရယ်လို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်ပိုင်းခြား မရပါဘူး။
ဂိုဂယ်လ်ကဖန်တီးထားတဲ့ ၂၀၁၁ကတော့ မကြုံစဖူးအကြုံထူးတဲ့ အမှတ်ရစရာ
ဘိုဖြူ December 18, 2011 at 3:29 PM
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 18, 2011 at 11:11 PM
ထူးထူးဆန်းဆန်း မောင်သန့် ...း)
I am gay ဆိုရင်.. Almost Famous ရုပ်ရှင်ထဲက လေယာဉ်ပျက်ကျကာနီး အခန်းကို သတိရမိတယ်နော့။ အားလုံးက လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး သေတော့မယ်မှတ်လို့.. ကိုယ့်လျှို့ဝှက်အကြောင်းတွေကို အသီးသီး ၀န်ခံကြတာလေ..။ အားလုံးလဲ ၀န်ခံပြီးရော..၊ နောက်တော့ လေယာဉ်က ပျက်မကျဘဲ ပြန်ကောင်းသွားတယ်..။ ကြည့်ပြီးသားလား မသိဘူး။
. December 19, 2011 at 9:02 AM
@4:00 ~ @4:05
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 19, 2011 at 2:23 PM
ဂေးဆိုတာ အမှန်မပြောလို့ သော်လည်းကောင်း
မိဘက သိသိကြီးနဲ့ သားဖြစ်သူကို အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်လို့သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်က မိန်းခလေး အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ဆင်းရဲရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ရတာတွေပေါ့။
ခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောလိုက်တော့ အားလုံးအတွက် ကောင်းတာပေါ့လေ။ သူတို့လည်း ဂေးဘယ်ဖြစ်ချင်မလဲနော်.
MG THANT December 19, 2011 at 3:52 PM
@မဘေဘီ ကျွန်တော်က ၀န်ခံစရာရှိဝူး ဟီးဟီး
@ဒေါ်လေး PN .. so so funny. Must keep until sure death :D
အာလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ...